विजय शाहीको फर्मुला सार्वजनिक ! गुरुले खोले वास्तविकता, देखाए लाइभ डेमो, यस्ता व्यक्ति बिश्वमै छैन (भिडियो सहित) – Namaste Host
विजय शाहीको फर्मुला सार्वजनिक ! गुरुले खोले वास्तविकता, देखाए लाइभ डेमो, यस्ता व्यक्ति बिश्वमै छैन (भिडियो सहित)
February 14, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on विजय शाहीको फर्मुला सार्वजनिक ! गुरुले खोले वास्तविकता, देखाए लाइभ डेमो, यस्ता व्यक्ति बिश्वमै छैन (भिडियो सहित)
मेमोरी किङ्ग भनेर चिनिदै आएका विजय शाही केहि समय विवादमा परेका थिए। बिबादमा परेपछि विजय सामजिक संजाल बाट टाडा रहेका थिए। केहि समय एता फेरी विजय शाही देखा परेका छन्। अब विजय भन्छन म डेमो दिदिन अबो मेरो चेलाले डेमो दिन्छन। भन्दै अन्तर्वार्ता दिएका छन्। बिजय शाहीको सेमिनार कर्णालीबाट सुरू हुदै छ। आफुले सिक्न इच्छुक हुनुन्छ भने जान सक्नु हुन्छ भन्दै उनले अन्तर्वार्ता दिएका छन्।
विजय शाही । अहिले यो नाम भन्नेवित्तिकै युट्युबममा भिडियो हेर्नेहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ, उनले तहल्का मच्चाइरहेका छन् । तहल्का यस अर्थमा युट्युबमा उनका भिडियो भाइरल भइरहेका छन्, उनले आफ्नो प्रतिभा र क्षमता जसरी देखाएका छन्, त्यसले धेरैको ध्यान तानिरहेको छ ।
कतिसम्म भने उनको प्रतिभाको आधारमा अनेक मिम बनिरहेका छन्, उनलाई प्रोत्साहन गरेर होस् या उडाएर नै किन नहोस्, मानिसहरुले उनीमाथि भिडियो बनाइरहेका छन् । अनि उनले देखाएको अद्भुत प्रतिभाका कारण मानिसहरुमा आश्चर्य मात्र थपिएको छैन, केहीले त उनको यो काम ठगी हो भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले लागौँ, कालिकोटका विजय शाही कसरी चर्चामा आए भन्ने विषयमा । गत वर्ष माघको कुरा हो, विजय शाहीले मेमोरी किङ भनिएको विधामा च्याम्पियन बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाए । त्यसपछि उनको नाम चर्चामा आउन थाल्यो । यसअघि यो रेकर्ड नेपालका मेमोरी किङ भनेर समेत चिनिने अर्पण शर्माको नाममा थियो । शर्माले ४२ शब्द स्मरण गरेर रेकर्ड बनाएका थिए ।
विजय शाहीले फर्मुला पनि सार्वजनिक गरेका छन्। विजय शाहीको चेलीले क्यामराकै आगाडी लाइभ डेमो दिएकी छन्। विजय शाहीको छेउमै बसेका विजय शाहीको गुर भन्छन यस्ता व्यक्ति बिश्वमै छैन (भिडियो सहित)
यसकारण महिलाहरु कण्ड’म लगाएर शारिरीक सुखभो’ग मन पराउँदैनन [४ कारणसहित]